Vaovao - Lanonana fanokafana ny Fujian Nebula Testing Technology Co., Ltd.
Ny lanonam-panokafana ny sampana mitazona ny Fujian Nebula Electronics Co., Ltd (antsoina hoe vondrona Nebula) - Fujian Nebula Testing Technology Co., Ltd (Ity no antsoina hoe Nebula Testing) dia notontosaina tamim-pahibemaso tao amin'ny Distrikan'i Mawei, Fuzhou tamin'ny 26fahaJolay. Ny mpitarika manan-danja avy ao amin'ny Distrikan'i Mawei, ary koa ireo mpiara-miombon'antoka manan-danja toa ny CATL, Fujian Contemporary Nebula Energy Technology Ltd, TÜV, SÜD, sns dia nanatrika ny lanonana.
Ny fametrahana ny Nebula Testing dia fepetra iray lehibe amin'ny fanovana sy fanavaozana ny vondrona Nebula avy amina mpanamboatra fitaovana nentim-paharazana mankany amin'ny orinasam-panompoana. Izy io dia afaka manampy ny mpanjifa fototra hamaha olana toy ny tsy fahampian'ny loharanom-pahalalana sy ny fitaovana ary ny fiasan'ny fitaovana izay tsy afaka mamaly ny filan'ny fampandrosoana angovo bateria. Ary koa, afaka manampy antsika hanatsara sy hanatsara hatrany ireo fitaovana fanandramana misy asa vaovao izy ity, mba hanatsarana ny fifaninanana amin'ny vokatra amin'ny tsena. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fivelarana matanjaka amin'ny Internet indostrialy sy ny famokarana manan-tsaina, ny fiheverana ny fifandraisana sy fitantanana manan-tsaina dia lasa manandanja kokoa. Ny vondrona Nebula dia manantena ny hahatsapa famokarana manan-tsaina avy amin'ny famokarana nentim-paharazana, ary hahatsapa ny fampidirana rojo indostrialy ny famakafakana angon-drakitra indostrialy sy ny fampiharana miorina amin'ny indostrian'ny Internet.
Ny Nebula Testing tamin'ny voalohany dia nanangana ny fizahana fampiharana vahaolana voalohany indrindra mifototra amin'ny indostria 4.0. Ny "Power Battery Testing Big Data Intelligent Management Platform Version 2.0" noraisin'i Nebula Testing dia vokatra iray manana zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina feno an'ny vondrona Nebula. Ny Nebula Testing dia nahatsapa ny sehatra fitantanana orinasa, ny nomerika momba ny fitantanana an-toerana, ary ny faharanitan-tsaina mifehy ny vondrona afovoany taorian'ny famoronana vokatra efa ho herintaona. Sehatra ivotoerana fanaraha-maso marani-tsaina koa no natsangana mba hahitana ny fandaharam-potoanan'ny filaharana mahomby, ny fanarahan-dia mandeha ho azy ary ny fampitandremana ny tontolon'ny andrana, ny fandanjana mandeha ho azy ny fanjifana angovo avy amin'ny angovo, ny fandidiana lavitra sy ny fikojakojana ny fitaovam-panadinana sy ireo asa hafa amin'ny alàlan'ny fampidirana data be teknolojia algorithm sy fitantanana. Azo lazaina fa io no laboratoara antoko fahatelo lehibe indrindra sy mandroso indrindra ho an'ny modely bateria herinaratra sy fitsapana ny fahombiazan'ny rafitra ao Shina.
Ny fananganana ny orinasa Nebula Testing Company dia tsy vitan'ny vokatra tonga lafatra amin'ny fanavaozana maharitra maharitra sy fanovana ataon'ny tarika Nebula, fa vokatra tsara ihany koa amin'ny fitarihan'ny komity antoko sy ny governemanta amin'ny ambaratonga rehetra sy ny fanohanan'ny mpanjifa sy mpamatsy. Amin'ny ho avy, ny vondrona Nebula dia hanitatra bebe kokoa ny fari-piaraha-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka tena tsara amin'ny indostria isan-karazany, hiara-hiasa hamorona fotoana vaovao, hanomezana vokatra sy serivisy tonga lafatra kokoa ho an'ny mpanjifa ary hamorona vokatra tsara miaraka!
Fotoana fandefasana: Jul-27-2019
Testeran'ny fahafahan'ny famoahana bateria, Fitsapana famoahana bateria, Fitaovana fitsapana mandeha ho azy bateria, 18650 Tester, Tester mamoaka fahaizan'ny bateria 48v, Fitaovana fitsapana bateria,